Kulesi sifundo esibizwa ngezinhlamvu zesiNgisi nezinhlamvu zesiNgisi, sizofunda i-alfabhethi lesiNgisi, izinhlamvu ezi-alfabhethi zesiNgisi, ukubizwa nokubhalwa kwezinhlamvu zesiNgisi. Enkulumweni yethu yama-alfabhethi esiNgisi, sizofaka nemisho eyisampula mayelana nezinhlamvu zesiNgisi.
Izinhlamvu zamagama zesiNgisi
I-alfabhethi lesiNgisi lisebenzisa izinhlamvu ezise-Latin alphabet njenge-Turkish. Kule ndatshana Izinhlamvu zamagama zesiNgisi Ungafunda isihloko. Isipelingi sezinhlamvu zesiNgisi kanye Pronunciation English alfabhethi Ungabona inkulumo.
Zingaki Izinhlamvu Ezikhona Ngezinhlamvu ZesiNgisi?
Izinhlamvu zamagama zesiNgisi; A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Sezizonke izinhlamvu ezingama-26, kufaka phakathi uZ. Ezingu-21 zalezi zinhlamvu zingongwaqa kanti ezi-5 zingonkamisa. Onkamisa babalulekile olimini lwesiNgisi, kepha kunzima ukufundwa ngoba bangenza imisindo yomibili emide nemifushane. Ngokungafani neTurkey izinhlamvu q, w, x Kukhona.
Izinhlamvu ç, ğ, ö, ş, ü ngesiTurkey azitholakali ngesiNgisi. Kuwulimi olungafundwa njengoba kubhalwe ngesiNgisi. Ngaphezu kwalokho, ukupelwa kwamagama amancane njengonhlamvukazi kuyahlukahluka.
Manje ake siqale ngokunikeza izinhlamvu zamagama zesiNgisi ezinezithombe. Kamuva, sizoklelisa zonke izinhlamvu bese sichaza ukubizwa kohlamvu ngalunye ngalunye ngamagama ayisampula.
I-Alphabet yesiNgisi - enezithombe
I-Alphabet yesiNgisi, Izincwadi ZesiNgisi nokuphimisela
Ohlwini olungezansi, ungathola isipelingi samagama akha izinhlamvu zamagama zesiNgisi njengonobumba abancane nabonobumba abakhulu, kanye nokuphinyiselwa kwawo. Ukwazi izinhlamvu zamagama kubalulekile ekuthuthukiseni amakhono akho okufunda nokuba nokuzethemba okwengeziwe kumakhono akho esiNgisi. Kulolu hlu, ungathola uhlamvu ngalunye nokuphinyiselwa kwalo ezinhlamvwini ezinkulu nezincane.
c - C - isi
h - H - ukuvula
i - I - inyanga
k - K - ukhiye
l - L - isandla
n - N - isb
w - W - kuhlukaniswe
x - X - isib
Ikakhulukazi lapho ufundisa izinhlamvu zesiNgisi kubafundi basenkulisa kanye nabaphansi ingoma yamagama ya da Izinhlamvu zesiNgisi ividiyo ungasekela nge.
Ungasifunda kalula lesi sihloko ngokumemezela ukuphinyiselwa kwemisho eyisampula ngokuzwakalayo futhi ulalele ukuthi uhlamvu ngalunye lubizwa kanjani. Ngasikhathi sinye, uma ubuka uchungechunge lwangaphandle lwe-TV noma ama-movie anemibhalo engezansi yesiNgisi nama-voiceovers esiNgisi, ungabona kalula ukupela nokuphinyiselwa komusho.
Ungazifunda Kanjani Izincwadi ZesiNgisi
Ungayifunda Kanjani Incwadi A ngesiNgisi?
Ubudala (eyc): ubudala
Isilwane (enimil): isilwane
Ungayifunda Kanjani Incwadi B ngesiNgisi?
Inyoni (börd): inyoni
Ungayifunda Kanjani Incwadi C ngesiNgisi?
Akunanhlamvukazi O nezinhlamvu ezintathu ezincane esiNgisini. Ukubizwa kwencwadi C kuyehluka ngokwegama elitholakala kulo. Iphuzu okumele liqashelwe ukuthi lapho izinhlamvu u-c no-h zihambisana, uhlamvu luzozwakala kathathu. Kungazwakala futhi ngokuthi "ch" "k" ngokuya ngemvelaphi yolimi yalelo gama.
Woza (cam): woza
Idolobha (siti): idolobha
Ungayifunda Kanjani Incwadi D ngesiNgisi?
Inja (inja): inja
Ungayifunda Kanjani Incwadi E ngesiNgisi?
Uhlamvu u-E lunezibizo ezahlukahlukene ngokuya ngemvelaphi yegama.
Iqanda (isib): iqanda
Iso (inyanga): iso
Yidla (iit): ukudla
Ungayifunda Kanjani Incwadi F ngesiNgisi?
Umndeni (owesifazane): umndeni
Ungayifunda Kanjani Incwadi G ngesiNgisi?
Akukho "ğ" ku-alfabhethi lesiNgisi.
Umdlalo (isitabane): umdlalo
Intombazane (bona): ntombazane
Ungayifunda Kanjani Incwadi H ngesiNgisi?
Ujabule (hepi): ujabule
Isigqoko (het): isigqoko
Ungayifunda Kanjani Incwadi YesiNgisi I?
Ngabe ngine-english Encwadini I yigama elithakazelisayo / elithakazelisayo, sibona ushintsho ekwakhiweni kwale ncwadi. Azikho izinhlamvu ezinkulu ze-I nezinhlamvu ezincane ngesiNgisi.
Mina (inyanga): Mina
Iqhwa (ays): iqhwa
Ungayifunda Kanjani Incwadi J ngesiNgisi?
Joyina (uhlamvu lwemali): joyina
Jump (camp): gxuma
Ungayifunda Kanjani Incwadi K ngesiNgisi?
Uhlamvu K luyahluka ngokwegama elitholakala kulo.
Inkosi (inkosi): inkosi
Yazi (nov): ukwazi
Qaphela: Uhlamvu k alufundeki lapho izinhlamvu uKno zihambisana.
Ungayifunda Kanjani Incwadi L ngesiNgisi?
Ulimi (lenguic): ulimi
Ungayifunda Kanjani Incwadi M ngesiNgisi?
Imali (imania): imali
Umama (madir): umama
Ungayifunda Kanjani Incwadi N ngesiNgisi?
Igama (neym): igama
Okusha (niüv): okusha
Isishiyagalolunye (nayn): eziyisishiyagalolunye
Ungayifunda Kanjani Incwadi O ngesiNgisi?
Azikho izinhlamvu ezinkulu nezincane ku-alfabhethi lesiNgisi.
Vula (umbono): vula
Eyodwa (iveni): eyodwa
Ungayifunda Kanjani Incwadi P ngesiNgisi?
Isithombe (picchır): isithombe
Dlala (pley): dlala, dlala
Ungayifunda Kanjani Incwadi Q NgesiNgisi?
Ngokushesha (kuik): ngokushesha
Ungayifunda Kanjani Incwadi S ngesiNgisi?
Ayikho incwadi "ş" ngesiNgisi. Lapho izinhlamvu u-S no-h behambisana, inikeza umsindo "ş".
Ulwandle (sii): ulwandle
Indaba (sitarian): indaba
Ungayifunda Kanjani Incwadi T ngesiNgisi?
Lapho izinhlamvu "th" zihambisana, ukuphinyiselwa kunqunywa ngokuya ngemvelaphi yegama.
Ithebula (itheyiphu): ithebula
Cabanga (tink): ukucabanga
Lokhu (dis): lokhu
Ungayifunda Kanjani Incwadi U ngesiNgisi?
Ayikho incwadi "ü" ngesiNgisi.
Sebenzisa (yuuz): ukusebenzisa
Okujwayelekile (yujıl): okujwayelekile
Ngaphansi (isikhashana): ngaphansi
Ungayifunda Kanjani Incwadi V ngesiNgisi?
Kakhulu (idatha): kakhulu
Vakashela (vakashela): vakashela
Izwi (vois): izwi
Ungayifunda Kanjani Incwadi W ngesiNgisi?
Impi (vor): impi
Ukunqoba (vin): win
Okungalungile (rong): akulungile
Qaphela: Lapho izinhlamvu "wr" zihambisana, u-W akafundiwe, okusho ukuthi umsindo we-V awuzwakali.
Ungayifunda Kanjani Incwadi X ngesiNgisi?
I-X-ray (i-ex-ray): i-x-ray
I-Xerox (zirox): ikhophi
Ungayifunda Kanjani Incwadi Y ngesiNgisi?
Yebo (yebo): yebo
Intsha (yang): encane
Ungayifunda Kanjani Incwadi Z ngesiNgisi?
I-Zoo (züu): i-zoo
I-Zero (ziro): zero
Izifinyezo eziningi zesiNgisi ukwenza izinhlamvu zesiNgisi, Ungazibhala kanjani izinombolo ngesiNgisiKufanele unake izindaba ezifana nezihloko. Ungathuthukisa umkhuba wakho ngokufunda imisho eyisampula noma imibhalo eyisampula ngale ndaba. Ukubuka amavidiyo wama-alfabhethi esiNgisi nokulalela izingoma zama-English alfabhethi kuzokunika inqubekela phambili eningi kulokhu.
Bangani abathandekayo, nifunda isihloko se-alfabhethi lesiNgisi. Uma ufuna ukubona zonke ezinye izifundo zethu zesiNgisi, chofoza lapha: Izifundo zesiNgisi
Umlando wama-alfabhethi esiNgisi
AmaNgisi; Inamagama avela ezilimini eziningi ezahlukene, kufaka phakathi isiFulentshi, isiGreki nesiLatini. Ungabona lokhu kupelingi lwamagama amaningi esiNgisi. Ulandela umthetho we-English wefonotiki; kodwa-ke, ngenxa yalawa magama angeziwe, imithetho iyinkimbinkimbi ukufunda nokusebenzisa.
Kuze kube ngo-1835, i-English Alphabet yayiqukethe izinhlamvu ezingama-27: uhlamvu lwama-27 lwezinhlamvu zamagama ngemuva nje kokuthi u- "Z" kwakuyisibonakaliso "no" (&).
Namuhla, i-English Alphabet (noma i-Modern English Alphabet) inezinhlamvu ezingama-26: ezingama-23 ezivela ku-Old English no-3 kamuva ezingeziwe.
Amagama esiNgisi lyrics
Ngiyakwazi ukucula ama-ABC ami,
Ngeke ucule kanye nami?
Ungazifundisa Kanjani Izincwadi ZesiNgisi Kubafundi Besikole Esisisekelo?
Ngenkathi bafunda isiNgisi, abafundi bezikole zamabanga aphansi bazoqala kuqala ngesihloko sezinhlamvu. Ukuthuthuka kulolu daba, ungenza umehluko ngokuya ngeminyaka; Sincoma ukufundisa izinhlamvu ezi-5 ngesifundo ngasinye sabaneminyaka engu-7-3 nezinhlamvu ezi-7 ngesifundo ngasinye sezingane ezingaphezu kweminyaka engu-5. Ungaqala ngezinhlamvu ezincane bese uqhubekela kohlamvu abakhulu ngemuva kokuba abafundi sebezifunde kahle.
Njengoba ufundisa uhlamvu ngalunye, ungasebenzisa imisebenzi ukuzijwayeza nokuqinisa uhlamvu ngalunye. Umsebenzi oyisibonelo;
Izingane ziyathanda ukubhala ebhodini noma ebhodini elimhlophe. Ngemuva kokufundisa uhlamvu ngalunye, nikeza umfundi ushoki / umaki bese umcela ukuthi abhale incwadi ebhodini (enkulu ngangokunokwenzeka). Ungenza abafundi abangaphezu koyedwa benze lokhu ngohlamvu ngalunye.
Okunye ukuzivocavoca kungaba ukumcela ukuba ahlukanise igama lakhe libe amalunga. Ake sinikeze isibonelo umbhalo;
Imibuzo engabuzwa mayelana nesipelingi,
- "Ulipela kanjani igama lakho?"
- "Ngicela, upelete igama lakho?"
- "Igama lami nginguMete, METE"
Ake sibuze umuntu igama lakhe nokuthi angalipela kanjani. Bese umethula igama lakho nesipelingi. Nasi isibonelo:
-Ubani igama lakho?
Igama lami ngu …….
-Ulipela kanjani igama lakho?
Ikona… .. -… .. -… .. -
IsiZulu Alphabet Sample Imibuzo
Ungayibiza kanjani incwadi A ezinhlamvwini zesiNgisi?
Ungayibiza kanjani incwadi W ngezinhlamvu zamagama zesiNgisi?
B. dublu futhi
C. kabili kanye
Yiziphi kulezi zinhlamvu ezilandelayo ezitholakala ngesiTurkey kodwa hhayi ngesiNgisi?
Yiziphi kulezi zinhlamvu ezilandelayo ezitholakala ngesiNgisi kepha hhayi ngesiTurkey?
Yikuphi kokulandelayo incwadi efundwa njenge-ZED ku-alfabhethi lesiNgisi?
Ungayibiza kanjani incwadi J ezinhlamvwini zesiNgisi?
Yikuphi kulezi zinhlamvu ezingekho ku-alfabhethi lesiNgisi?
Yikuphi kokulandelayo ongwaqa?
Indlela yokubiza incwadi M in English?
Zingaki izinhlamvu ezikhona ku-alfabhethi lesiNgisi?
Ungazibiza kanjani izinhlamvu eduze kwesiNgisi?
Ungazibiza kanjani izinhlamvu oe eduze komunye nomunye ngesiNgisi?
Ungaliphimisa kanjani igama elithi bhala?
Ungasibiza kanjani isikimu segama?
Sekukonke Ukuchazwa kwesihloko se-Alphabet yesiNgisi Kungabonakala kulula uma uthi nhlá. Kepha kungenzeka ukuthi uqaphele ukuthi uhlamvu ngalunye lungaba nokuphinyiselwa okuningi. Ezinye izincwadi azitholakali ngesiTurkey. Kulesi sihloko, inhloso yethu ukusula ukudideka kwakho futhi wenze ukufunda izinhlamvu zamaNgisi kungabi nokucindezeleka.
Ungazibamba Kanjani Ngekhanda Izincwadi ZesiNgisi?
Kulesi sahluko Ngekhanda izinhlamvu zesiNgisi kalula Sizokunikeza amaqhinga ambalwa.
Kubalulekile ukulalela isikhulumi sendabuko ukuze ufunde ukuthi ungabiza kanjani uhlamvu ngalunye. Khumbula ukuthi kuzoba nzima kakhulu ukuqonda izikhulumi zesiNgisi engxoxweni ekuqaleni. Uma umusha esiNgisini, ungahle uthande ukucabanga ngokulalela i-podcast yesiNgisi eyenzelwe ukufundisa isiNgisi kwabaqalayo.
Bhala iculo lakho lama-alfabhethi: Zama ukuthola indlela yakho yokucula ngama-alfabhethi noma ucule izinhlamvu ngokuya ngomculo wengoma yakho oyithandayo. Ngokwenza ingoma yakho, ungenza ingoma ihehe kakhulu.
Hlanganisa izinhlamvu namagama athile. Indlela elula yokwenza lokhu ukubhala indaba enamagama angama-26 lapho igama ngalinye liqala khona ngohlamvu oluhlukile lwezinhlamvu zamagama.
“Ngemuva kokudla kwasekuseni, amakati acekele phansi yonke into. Inhlanzi, imidlalo, izinto zasendlini… ”
Sebenzisa izinkumbulo zakho njengoba uqhubeka nendaba bese uzama ukusebenzisa zonke izinhlamvu ezingama-26 ngokulandelana. Khumbula, akudingeki ukuthi ibe nengqondo ephelele! Lapho indaba ingenangqondo ngokwengeziwe, maningi amathuba okuthi uyikhumbule, ngakho-ke qiniseka ukuthi uzijabulisa ngenkathi uqhuba lo msebenzi!
Ngenkathi ufunda izinhlamvu zamagama zesiNgisi, akufanele uphuthelwe ukuphindaphinda nokulalela ukuphinyiselwa kwezinhlamvu. Ukufunda igama okulula ukulikhumbula eduze kwencwadi ngayinye kungakusiza nokuthi uzikhumbule kangcono izinhlamvu. Ngalokhu, ungasebenzisa futhi amagama esiwanikeze njengezibonelo eduze kwencwadi ngayinye.
Izinhlamvu zesiNgisi azikhulunywa ngendlela esibhala futhi sisho ngayo ngesiTurkey, imisindo yehlukile. Ukuphinyiselwa kwamagama ezinhlamvu zesiNgisi kuyehluka kuye ngegama. Isizathu esiyinhloko salo mehluko imvelaphi yamagama. Ngakho-ke, ukupela nokubizwa kwazo zonke izinhlamvu zesiNgisi kwehlukile. Lezi zinhlamvu ziveza izinhlobo zemisindo ezingamashumi amane nane. Iqiniso lokuthi kunezinhlobo eziningi zemisindo kunezinombolo zamagama alfabhethi empeleni lenza kube nzima ukufunda izinhlamvu zamagama. Yize kulula ukuzibamba ngekhanda izinhlamvu, ukukhishwa kwencwadi efundwa nokuthi yimuphi umsindo ezwini kungadala ukudideka.
Okokuqala, ungazama ukulalela izingoma zama-English alfabhethi ukuze ufunde futhi uqinise ulwazi lwakho lwe-English alfabhethi. Ungabamba ngekhanda amagama alula nezinhlamvu ngokubuka opopayi besiNgisi ukuze ufunde kabanzi. Ukulalela imilolotelo yesiNgisi nokubuka opopayi kuzokusiza ukuthi ufunde izinhlamvu zesiNgisi ngenjabulo futhi uqonde amagama alula ngokucacile. Ukufunda ukubizwa kwamagama esiNgisi, ungabamba iqhaza emisebenzini lapho ungazijwayeza ukukhuluma njalo. Ukufunda i-alfabhethi lesiNgisi yisinyathelo sokuqala sokufunda isiNgisi.
Zenzele umgomo nohlelo lokufunda lokufunda isiNgisi. Ngabe udinga kanzima kangakanani ukusebenzela ukufinyelela izinhloso zakho? Le mpendulo yehlukile kuwo wonke umuntu. Into ebalulekile ukuthi ubhekane namaqiniso. Uma usebenza amahora angama-60 ngesonto, ungahleleli ukufunda isiNgisi ngamanye amahora angama-40 ngesonto. Qala kancane, kodwa funda njalo.
Sebenzisa izinto eziyinselele kepha hhayi ezinzima kakhulu. Thola ukuthi yini okusebenzelayo. Ngemuva kokusebenza amasonto ambalwa, lungisa uhlelo lwakho lokufunda ngokufanele. Ingabe usebenza ngobusuku obuhle kakhulu noma ngebhasi ukuze usebenze? Uyathanda ukusebenza wedwa noma nabangani nomculo wangemuva endaweni ethulile? Uma ungakuthandi ukufunda isiNgisi, awufundi kahle! Ungazinikeza izikhuthazo zokuqhubeka nokulandela umgomo wakho. Ungakha uhlelo lokuvuza kusifundo ngasinye osifezile.
Abanye abafundi bafuna ukwazi ukuthi yiliphi ikhono elibaluleke kakhulu. Ngakho-ke bahlela ukuqala ngokubaluleke kakhulu kuqala. Zonke zibala, njengoba wonke amakhono asuselwa komunye nomunye. Kodwa-ke, sisebenzisa amakhono athile kaningi kunamanye ukuxhumana. Isibonelo, cishe i-40% yesikhathi esisichitha ukuxhumana, silalele nje. Sikhuluma cishe i-35% yesikhathi. Cishe i-16% yokuxhumana ivela ekufundeni futhi cishe i-9% kusuka ekubhalweni. Lapho ufunda isiNgisi, ake uhlobo oluthile lokufunda luqhubekele kolunye. Isibonelo, funda indaba bese uxoxa ngayo nomngane wakho. Bukela i-movie bese ubhala ngayo.
Kungaba nzima ukuqala noma yini kusukela ekuqaleni, ikakhulukazi uma ufunda ukubhala ngolimi oluhluke ngokuphelele kolwakho. Kufana nokuhamba wedwa endaweni ongayazi nhlobo. Kepha ungafunda kalula ngezibonelo nokuzivocavoca okufakwe kule ndatshana.
Gcina incwadi yokubhalela ukuze ufunde amagama amasha. Lapha, bhala amagama osanda kuwafunda ngokulandelana kwama-alfabhethi. Ngakho-ke ungabona futhi ubambe ngekhanda igama ngalinye kangcono. Izinhlamvu ZesiNgisi Isifundo Sokufunda Ungeqi ukuzijwayeza ukuxazulula imibuzo yokuhlola ngemuva kweseshini yokuqeqesha. IsiNgisi sifundeka kalula futhi sisheshe uma usithola nsuku zonke.
# Izinhlamvu zamagama zesiNgisi
# Zingaki Izinhlamvu Ezikhona Ngezinhlamvu ZesiNgisi?
# I-Alphabet yesiNgisi - enezithombe
# I-Alphabet yesiNgisi, Izincwadi ZesiNgisi nokuphimisela
# Ungazifunda Kanjani Izincwadi ZesiNgisi
# Umlando wama-alfabhethi esiNgisi
# Ingoma yeABC
# Ungazifundisa Kanjani Izincwadi ZesiNgisi Kubafundi Besikole Esisisekelo?
# IsiZulu Alphabet Sample Imibuzo
# Ungazibamba Kanjani Ngekhanda Izincwadi ZesiNgisi?
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe ezinyangeni ezi-3 ezedlule, ngo-Agasti 26, 2021, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngo-Agasti 28, 2021.